Qawween Ilmi Oromoo Baatu Kamuu Eenyummaa Oromoo Tiksuu fi Akeeka Bilisummaa Oromoof Ooluu Qaba! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQawween Ilmi Oromoo Baatu Kamuu Eenyummaa Oromoo Tiksuu fi Akeeka Bilisummaa Oromoof Ooluu Qaba!
(Ibsa Ajajaa ol-aanaa ABO/WBO)
Ilmaan Habashaa qawwee hidhatani Oromiyaatti duuluun Oromoo saamaa fi ajjeesaa jiraachuun isaanii beekamaa dha. Murnooti Tigray, Tigrinyaa fi Amhaaraa keessaa bahanis doofaa maqaa Oromoo himatu gargaaramuun Oromoo irratti yakka raawwataa jiraatan. Ilmaan Nafxanyootaa Oromummaan sodaa itti ta’e partii prosperity (PP) jedhamu karaa Abiy Ahimed tolfatanii humna Oromummaa jabeessuu fi Oromiyaa ijaaru kamuu dhabamsiisuuf imaammata tolfatanii sosso’aa jiru. Gaaffiilee Oromoo kan akka gaaffii mirga hiree murteeffannaa, gaaffii Finfinnee, gaaffii haqaa, gaaffii mirga abbaa biyyummaa, gaaffii dimookraasii, gaaffii nagaan jiraachuu fi gaaffii kabajamuu mirga dhala namaa mara cabsuuf dhama’u.
Gaaffiileen bu’uuraa kun akeeka ABO/WBO waan ta’eef, ABO/WBO diina innikkaa tolfatanii daboo biyya ollaa fi alaa kadhatanii lolatti bobbahanii jiru. Lolli WBO fi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jirus gaaffiilee bu’uuraa Oromoon qabu irra ejjetuu fi ukkamsuuf kan akkeekkate dha. Lolli kun Oromiyaa mara keessatti kallattii maraan; Lixa, Kibba, Gidduu Galeessaa, Kaaba fi Baha Oromiyaatti gaggeefamaa jira. Lola kana irratti WBO mirga argachaa akeeka dhaabbateef galmaan gahuuf kuffisee kufaa humna weerartuu waaroo salphinaa itti uffisaa jira.
Ajandaa dhoksaa PPn mirgooti xixiqqoo Oromoon qabsoo isaatiin argate sharafuun kaayyoo Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuun Impaayera Itiyoophiyaa tiksuun, eenyummaa Oromummaa dhabamsiisuun, Oromoo mana hidhaa keessa jiraachisuuf shiraa fi daba wal-xaxaa dalagamaa jiru dha. Akkuma Minliki Oromoo ajjeesee, harka muree, harma muree, manaa fi qabeenya gubee, saamee hiyyoomsee, ammas Oromoo gabrummaa haaraa jala galchuuf yakkii fi shirri guddaan hoggana Abiy Ahimed jalatti raawwatamaa jira. Toftaan PP jaarmiyaa siyaasaa Oromoo biyyatti deebisuun, toftaadhaan Oromoo qooduun, warraaqsa Oromoo fashalsuuf tattaafatuun hundi isaatuu Oromoo harqoota gabrummaa jala tursuuf kan wixiname ture. Miseensoti ABO jajjaboo hidhuun, Waajirri ABOn godinaalee Oromiyaa keessa jiran saamuu, haala dhibeen daddarbaa Koronaa addunyaa miidhaa jiru keessatti ilmaan Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuruun akka dhukkuba daddarbaa kanaaf saaxilaman tolchuun toftaa eenyummaa Oromummaa dhabamsiisuuf duulamaa jiru keessaa isa tokko dha.
Miseensoti PP maqaa Oromoon daldalan dantaa yeroof jecha ergama ilmaan Nafxanyaa bakkaan gahuuf dham’an, kaleessas miseensota OPDO ta’uun ergama TPLF fudhachuun ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti qeensa buqqisaa, miilla irraa ciraa, kolaasaa fi ajjeesaa turan. Har’as gochaa isaanii kaleessaa irraa osoo hin baratne, bifa irra hammaataa ta’een eenyummaa Oromoon wareegama qaalii itti baasee goonfate dhabamsiisuun Oromoo irratti gabrummaa bara dheeraa irratti fe’uuf halkanii guyyaa ifaajju.
Fedhiin uummata keenyaa sirna kolonii Oromiyaa irraa kaasuudhaan mootummaa walaba Oromiyaa dhaabee ummati Oromoo, hacuuccaa fi saamicha bifa hundaa jalaa bilisa baasuu dha. Akeeka kana galmaan gahuuf ammoo uummati keenyii fi WBOn wareegama feesisu mara baasuuf qophii ta’uu fi humni kamuu fedhii fi akeeka kana duubatti deebisuu akka hin dandeenye ajajaan ol-aanaa ABO/WBO mirkaneessa.
Fedhii fi hawwii Oromoo bakkaan gahuuf ammoo shira PPn dalagaa jirtu fashalsuu keessatti qoodi ilmaan Oromoo qawwee harkaa qaban ol-aanaa waan ta’eef, akka dirqama lammummaa isaanii akka dammaqinsaan bahattan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO waamicha dhiheessa:
Ilmaan Oromoo miseensoti waraanaa raayyaa ittisa biyyaa (RIB) Itophiyaa keessa jirtan; dibbeen lolaa Abiy Ahimed hidhaa Abbayyaa waliin wal qabatee tumaa jiru, ol-aantummaa seeraa kabachiisa jedhee uummata nagaa fixaa jiruu fi isiniin ibiddatti bobbaasaa jiru marti kan dantaa saba keessanii tiksuuf osoo hin taane aangoo siyaasaa isaa dheereffachuuf ta’uu hubachuu qabdu. Kanaaf, ilmaan Oromoo RIB keessa jirtan dantaa nam tokkee fi ilmaan Nafxanyootaa tiksuuf du’anii baduun fafa ta’uun hubachuun, bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaaf akka falmattan, akkasumas meeshaan harkaa qabdan kan abbaa irree uummata keessan fixaa jiru fi isin irratti gooftaa ta’uu hawwu of irraa kaasuuf gootummaadhaan qabsoo uummata keessanitti makamtani seenaa boonsaa hojjettan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO waamicha lammummaa isiniif dhiheessa.
Ilmaan Oromoo humna addaa Oromiyaa keessa jirtan; Abiy Ahimed aangoo fi dantaa ilmaan Nafxanyootaa tiksuuf jecha seera hin jirree fi ofii isaa hin kabajne kabachiisaa jedhee Oromiyaa keessa isin bobbaasuun lubbuu uummata nagaa fi keessan gaga’aa jira. Waan ta’eef, hawwii fi fedhii saba keenyaa hubachuun, akka qabsoo uummataa cinaa dhaabbattanii fi ajjeechaa fi gadadoo obbolaa, abbaa fi haadha keessani irraa dhaabuuf lola hin feesisne keessaa akka qooda hin fudhanne fi qawwee harkaa qabdan mara akka bilisummaa saba keessaniif oolchitan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO dhaama!
Ilmaan Oromoo polisii Oromiyaa keessa jiratan; hojiin keessan inni guddaa uummata keessan irraa yakka ittisuu dha. Oromiyaa keessatti yakki guddaan ammoo ajaja PP fi ilmaan Nafaxanyootaan dalagamaa jira. Kanaaf, yakka gama kamiinuu uummata keenya irratti dalagamaa jiru dura dhaabbattanii falmaa gaggeessuu jabeessitan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO gaafata!
Milishooti Oromomiyaa keessa jirtan; beekaas ta’e wallaalaan akeeka ilmaan Nafxanyaa bakkaan gahuuf hojjettan, gochaan kun isiniifis ta’e uummata guddeessaaf balaa ta’uu hubattanii nagaa fi tasgabbii uummataa dhugoomsuuf WBO naannoo keessan keessa sosso’u waliin wal hubatnoon hojjettan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO waamicha isiniif dhiheessa!
Walumaa galaatti duulli Oromummaa balleessuuf gaggeeffamaa ture diinota innikkaa qofaan osoo hin taane namoota hubannoo gahaa hin qabnee bobbaasuun Oromoo irratti duulamaa ture. Bara ammaa kanaatti immoo yeroo sabni Oromoo dammaqee, eenyummaa isaaf wareegama ol-aanaa baasaa jiru keessatti akeeka uummata cinaa dhaabbachuun qaroomina waan ta’eef, ilmaan Oromoo qawwee halagaaf baattan kamiyyuu, yeroon isin abbaa irree kan biyya abbaa keessan irratti mootii tahuuf lammii keessan ajjeesaa jiru of-irraa kaastan amma ta’uu ajajaan olaanaa ABO/WBO waamicha dhiheessa!
Dhuma irratti, duula eenyummaa Oromummaa dhabamsiisuuf gaggeeffamu yoomiyyuu waan hin milkoofneef hidhattooti Oromoo marti mooraa diinaa keessaa of baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebihuun, tokkummaan ilmaan Oromoo cimsuuf fi qawween harkaa qabdan mara diinatti garagalchuun akka bilisummaa Oromoof oolchitanii, eenyummaa Oromoos dhabama irraa baraartanii fi hidhaa, ajjeechaa fi hiraarfama uummata keessaniif owwaatuun dhaadannoo ‘Qawwee halagaaf hin baatnu! Uummataa fi obbolaa keenya hin ajjeesnu! Qawwee keenyaan eenyummaa keenya tikfanna! Bilisummaa keenyas goonfatna!’ jedhu qabattanii warraaqxan ajajaan ol-aanaa ABO/WBO gadi jabeessee dhaama!
Caamsaa 15, 2020
Gurmuun Hayyota Oromoo (GHO) Yaa’ii isaa 5ffaa, mata-duree: "Galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Carraa Oromiyaaf Hafte…
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi RSWO, August 25, 2019